Inona no ampiasaina amin'ny fitsaboana an'i Cefdinir? - BALLYA
Posted on March 25, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe cefdinir?
Cefdinirny endrika molekiola dia C14H13N5O5S2, ary ny anarana simika dia ([6R- [6α, 7β (Z)]] - 7 - [[(2-amino-4-thiazolyl) - (oximino) acetyl] Amino] -3- vinyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0] okt-2-ene-2-carboxylic acid, ao amin'ny 0.1mol / L phosphate buffer [0.1 Vahaolana kely ao amin'ny mol / L disodium hydrogen phosphate solution-0.1 mol / L potassium dihydrogen phosphate solution (2: 1)], fa tsy azo solika anaty rano, étanol na ether.
Cefdinir dia an'ny Cephalosporin taranaka faha-3, izay afaka misoroka ny firafitry ny rindrin'ny sela bakteria. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny bakteria miabo tsara sy tsara gram, indrindra ho an'ny voaloboka mavo volamena sy ny streptococci eo amin'ireo bakteria miabo gram-positive.
Ny Cefdinir dia tsy vitan'ny lactamase novokarin'ny bakteria, fa koa manana hetsika mahery vaika manohitra ny bakteria novokarin'ny lactamase. Amin'ny klinika, dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny taovam-pisefoana, ny urinary, ny sofina ary ny orona vokatry ny Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, sns.
Ny tokony hampatsiahivina dia ireo marary tsy mahazaka penisilinina tsy tokony hampiasa cephalosporine fanafody anti-bakteria. Raha tsy mahazaka azy ny hoditrao dia azo soloina fanafody miady amin'ny bakteria manokana toy ny roxithromycin.
Izy io dia manana karazany maro karazana bakteria mifanohitra amin'ny bakteria Gram-positive sy bakteria Gram-negatif, indrindra amin'ny Staphylococcus sy Streptococcus eo amin'ireo bakteria Gram-positive. Manana hetsika mahery vaika mahery vaika kokoa noho ny am-bava teo aloha cephalosporins. Ny fomba fiasa dia bakteria.
Izy io dia miorina amin'ny lactamase beta novokarin'ny bakteria isan-karazany ary manana fiasan'ny bakteria tsara amin'ny bakteria mamokatra laktamase beta. Ny fomba fiasa dia ny fisorohana ny fampifangaroana ny rindrin'ny sela bakteria. Manana firaiketam-po matanjaka ho an'ny penisilinina proteinina mamatotra (PBP) 1 (1a, 1bs), 2, 3, fa samy manana ny toerany kosa ny bakteria samihafa.
Ity vokatra ity dia manana fihetsiketsehana antibakterika marobe manohitra ny aerobes sy anaerobes gram-positive sy ratsy. Raha ampitahaina am-bava hafa misy antibiotika cephalosporin, ny hetsika bakteria an'ity vokatra ity dia mahery amin'ny Staphylococcus, Streptococcus, Peptostreptococcus, Propionibacteriu. Fitsapana ara-pitsaboana tranga 1433 (100 mg isan'andro, in-3 isan'andro) dia nampiseho fa ny taha mahomby amin'ity vokatra ity amin'ny aretina isan-karazany: aretina tsy mitongilana 89.2%, aretina 90%, aretin'ny taovam-pisefoana 82.8%, aretin'ny taovam-pisefoana maharitra 63.1. %, aretin-tratra urinary 82.8%, aretim-behivavy 88.4%, areti-maso ophthalmology 94.3%, ary 75% ny otolaryngology. Ny tahan'ny fahazoan-dàlana bakteria ara-bakteria dia 91.9%, ary ny tahan'ny fahazoana bakteria-bakteria dia 91.4%.
Na dia matotra aza ny fanararaotana antibiotika any Sina dia manamarina ihany koa ny fiantraikan'ny antibiotika mahery amin'ny lafiny iray hafa. Raha ny angom-baovao sy fampahalalana mifandraika amin'izany dia 138 grama ny salanisan'ny fihinanana antibiotika any Shina, izay folo heny noho ny an'ny Fanjakana Mitambatra, mitana ny laharana voalohany manerantany. Ho fanampin'izany, ny tahan'ny fampiasana antibiotika amin'ny marary hopitaly ao Shina dia nahatratra 80%, ary ny fampiasana antibiotika fampiasa amin'ny alàlan'ny spektrum malalaka sy ny fampiharana synergistic dia nahatratra 58%, mihoatra ny haavo iraisam-pirenena 30%.
Cefdinir dia iray amin'ireo cephalosporins, izay miasa mamono otrikaretina amin'ny alàlan'ny fanakanana ny synthesion'ny rindrin'ny sela bakteria. Ny fiparitahan'ny bakteria dia somary malalaka, ao anatin'izany ny bakteria miabo tsara, ary koa ny bakteria tsy manimba grama. Noho izany, cefdinir dia azo ampiasaina amin'ny klinika hitsaboana aretina amin'ny toerana maro ateraky ny bakteria mora tohina.
Ireo areti-mifindra ireo dia miseho amin'ny lalan-pisefoana ambony ary miseho toy ny pharyngitis, laryngitis, ary tonsillitis. Izy io koa dia mety hitranga ao amin'ny lalan-pisefoana ambany, toy ny bronchitis sy ny pnemonia. Izy io koa dia mety hitranga ao amin'ny rafi-pivalanana, toy ny cystitis, urethritis, ary pyelonephritis. Izy io koa dia mety hitranga amin'ny rafi-pananahana, toy ny fivontosana sy ny prostatitis. Izy io koa dia mety hitranga amin'ny hoditra sy ny tavy malemy, miseho ho follikulitis, mangotraka ny hoditra, erysipelas, cellulitis, sns.
Ny tena sandan'ny Cefdinir Capsules dia azo taratra amin'ny toerana maro. Voalohany indrindra, ny Cefdinir Capsules dia mahazatra. Misy fiatraikany mahery vaika amin'ny fanakanana bakteria isan-karazany amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Izy io dia afaka mitsabo aretina maro miaraka amin'ny fiatraikany ara-panafody lehibe. Izy io dia manana lanja ara-pahasalamana lehibe amin'ny fitsaboana urethritis gonococcal, fivontosan'ny adnexal ary ny aretin-kibo ao amin'ny tranon-jaza, ary koa ny mastitis sy ny mena mena, ary ny fisorohana ny aretina amin'ny ratra aorian'ny fandidiana sy aretina maro karazana, saingy vitsy ny olona mety hiaina tsy fihinanan-kanina ao am-bavony, tsy mahazo aina ny gastrointestinal, eczema amin'ny hoditra ary tsy fisian'ny rà aorian'ny fakana azy.
Cefdinir dia afaka mitsabo ireto aretina manaraka ireto ateraky ny Proteus mirabilis, Providencia, Haemophilus influenzae ary aretina hafa Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Peptostreptococcus, Propionibacterium, Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli sy Klebsiella izay mora tohina amin'ny cefdinir .:
Pharyngitis, tonsillitis, bronchitis maranitra, pnemonia;
otitis haino aman-jery, sinusitis;
Pyelonephritis, cystitis, urethritis gonococcal;
Annexitis, aretina intrauterine, bartholinitis;
Aretina faharoa mastitis, abscess manodidina ny anus, trauma na ratra fandidiana;
Follikulitis, furuncle, vay, carbuncle, impetigo areti-mifindra, erysipelas, cellulitis, lymphangitis, paronychia, abscous subcutaneaux, aretin'ny mony, pyoderma maharitra;
Aorian'ny fanaparitahana azy amin'ny rano dia raiso am-bava na atelina azy mivantana. Ny fatra mahazatra ho an'ny olon-dehibe dia 100 mg indray mandeha, intelo isan'andro. Ny fatra mahazatra ho an'ny ankizy dia 9-18 mg / kg isan'andro amin'ny fatra telo mizara. Ny fatra dia azo ampitomboina na hihena araka ny tokony ho izy arakaraka ny taona sy ny soritr'aretina, na araka ny baikon'ny dokotera.
Dermatologie: mety hitranga ny necrolysis epidermis misy poizina (<0.1%). Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha misy tazo, aretin'andoha, fanaintainan'ny mpiray, eritema / fivontosana eo amin'ny hoditra na fonosan'ny moka, na mahatsapa tery / may / maharary ny hoditra, dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Fihetseham-po amin'ny alikaola: mety hisy ny fihenan'ny alikaola, toy ny dispnea, erythema, angioedema, ary urticaria, miaraka amin'ny tahan'ny <0.1%. Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha sendra misy tsy fetezana dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Tohina: mety hitranga ny fikoropahana, miaraka amin'ny tahan'ny tranga <0.1%. Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha miseho ny soritr'aretina toy ny tsy mahazo aina, tsy mahazo aina eo am-bava, mievina, misavoritaka, mivalana, tinnitus na tsemboka dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Hematology: Pancytopenia (<0.1%), agranulositosis (<0.1%, soritr'aretina voalohany dia tazo, marary tenda, aretin'andoha, malaise), thrombositopenia (<0.1%, soritr'aretina voalohany dia ny Ecchymosis, purpura) na hemolytic anemia (<0.1%, ny ny soritr'aretina voalohany dia ny tazo, hemoglobinuria, ary anemia). Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha misy tsy fetezana dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Colitis: colitis mahery (<0.1%) mety hitranga, toy ny colitis pseudomembranous voamarin'ny ra. Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha sendra soritr'aretina toy ny fanaintainan'ny kibo na fivalanana matetika dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Pnemonia interstitial na syndrome PIE: pnemonia interstitial na syndrome PIE izay voamarin'ny tazo, kohaka, dyspnea, X-ray tratra na eosinofilia mety hitranga (<0.1%). Raha misy ny soritr'aretina toy izany dia tokony hatsahatra eo noho eo ny zava-mahadomelina ary mandray fitsaboana sahaza azy, toy ny fampiasana fanafody adrenocorticoid.
Aretin'ny voa: aretin'ny voa mahery (<0.1%) no mety hitranga, toy ny tsy fahombiazan'ny voina mahery. Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha sendra misy tsy fetezana dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Hepite hépatite, fiasan'ny aty tsy ara-dalàna na jaundice: mety ho tratry ny hépatite mahery (<0.1%), toy ny hépatite fulminant misy fiakarana avo ny alanine aminotransferase, aminotransferase aspartate na phosphatase alkaline, fiasan'ny aty tsy ara-dalàna (<0.1%) na jaundice (<0.1% ). Ny marary dia tokony hojerena akaiky. Raha sendra misy tsy fetezana dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza.
Araka ny fomba fanao, aorian'ny famaritana ny fahatsapana ny zavamiaina bitika amin'ity vokatra ity, ny fizotran'ny fitsaboana an'ity vokatra ity dia tokony hoferana amin'ny fotoana fohy indrindra takiana amin'ny fitsaboana ny marary hisorohana ny famokarana bakteria mahatohitra.
Soso-kevitra ny hisoroka ny fiarahana amin'ny fanomanana vy. Raha tsy azo sorohina ny fampiasana mitambatra dia tokony hampiasaina mandritra ny adiny 3 ny fanomanana vy aorian'ny fakana ity vokatra ity.
Noho ny mety hisian'ny hatairana na fanehoan-kevitra mahazaka hafa dia tokony anontaniana ny tantaran'ny allergy amin'ny antsipiriany.
Ireto marary manaraka ireto dia tokony hampiasa izany am-pitandremana:
Ireo izay manana tantaran'ny alikaola amin'ny antibiotika penicillin;
Ireo olona mora voan'ny asma bronchial, maimaika amin'ny hoditra, urticaria ary soritr'aretina mahazaka hafa ao aminy na amin'ny havany;
Ireo marary manana tsy fetezana voa mafy: satria cefdinir dia tao amin'ny serum an'ny marary nandritra ny fotoana lava be, dia tokony hahena ny fatra ary tokony hitarina ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny fitantanana arakaraka ny hamafin'ny fihenan'ny voa. Ho an'ireo marary mandalo hemodialisis dia 100 mg indray mandeha isan'andro ny fatra voatondro;
Ireo marary mijaly amin'ny aretina mafy, tsy afaka misakafo tsara na tsy am-bava, ny be antitra, cachexia, sns. (Mety hitranga ny tsy fahampian'ny vitamina K, ilaina ny fandinihana akaiky ny klinika).
Rehefa ampiarahina amin'ny vokatra nasiana vy (toy ny vovo-dronono na sakafo ara-dalàna fidirana) dia mety hiseho ny seza mena sy ny mena mena.
Mikasika ny fanafody mandritra ny fitondrana vohoka dia mbola tsy azo antoka ny fiarovana azy. Ho an'ireo vehivavy bevohoka na vehivavy izay ahiahiana ho bevohoka, ny lanjany sy ny maharatsy ny fanafody dia tokony holanjaina ary tsy azo ampiasaina raha tsy mihoatra ny fahavoazana ny pro.
Ny mahatsara sy maharatsy ny fanafody dia tokony lanjain'ny vehivavy mampinono, ary tsy tokony hampiasaina raha tsy mihoatra ny lafy tsarany ny tombony.
Tsy azo antoka ny fiarovana ny fanafody ho an'ny zaza vao teraka sy ny zaza vao teraka izay tsy ampy lanja.
Noho ny fihenan'ny fiasa ara-batana, ny marary be taona dia mety ho mora tohina.
Noho ny tsy fahampian'ny vitamina K, ny marary antitra dia mety manana fironana mandeha ra.
Ho fanampin'izany, ny fiantraikan'ny fampiasana tafahoatra ny cefdinir mbola tsy nianarana. Ao amin'ny fandalinana fery maranitra, misy poizina ary manafoana, ny fatra am-bava tokana 5600 mg / kg dia tsy namokatra vokatra hafa. Hafa beta lactam ny antibiotika dia mety hiteraka vokadrats'ireto manaraka ireto rehefa tafahoatra ny fotoana: maloiloy, mandoa, mivalana ary mangeja. Afaka manala ny dialyoma serum cefdinir avy amin'ny vatan'olombelona. Hemodialysis dia ilaina ho an'ny marary misy fiatraikany poizina ateraky ny fanafody be loatra, indrindra ho an'ireo marary tsy ampy amin'ny voina.
Cefdinir dia an'ny Cephalosporin taranaka faha-3. Na ho an'ny karazany bakteria na ho an'ny bakteria, dia nihatsara be izy io raha oharina amin'ireo cephalosporins roa. Saingy misy ihany koa ny fiatraikany manokana, toy ny seza mena sy urinà mena, izay mila ny saintsika.
BALLYA manome a kitapo fitsapana combo betalactam cephalexin hilaza aminao raha misy laktama beta residues sy residue cephalosporin amin'ny vokatra ronono nohaninao isan'andro.